Ny Valosoa, 29/06/2017. Marc Ravalomanana, Fahaleovantena, Antsirabe, Filaminana, Cepe… | Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris
← Décès de Simone Veil « Une conscience morale », deportée, humaniste, ministre, academicienne…
D’Gary, Randrianasolo Ernest. Music. →
Ny Valosoa, 29/06/2017. Marc Ravalomanana, Fahaleovantena, Antsirabe, Filaminana, Cepe…
Ho avy koa ny avy amin’ny Faritra 22 amin’ny 8 jolay
Toy ny isan-taona dia tsy mitsahatra ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ao amin’ny boriborintany faha- 4 mizara fanomezana ho an’ireo sahirana ara-pivelomana manerana ny fokontany 32 ao an-toerana rehefa tonga ny fetin’ny Asaramanitra ny 26 jona nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena . Notolorana vary , menaka , arendrina ary ranomboankazo ireo mponina miisa 400 teo ka nanolotra izany teny Namontana foiben-toeran’ny antoko Tiako i Madagasikara ao amin’ny boriborintany faha- 4 ny solombavambahoaka Félix Randriamandimbisoa , ny DISTIM , Vehivavy TIM ary ny Tanora TIM .
Nambaran’ny depiote Félix, izay sady filohan’ny vondrona parlemantera TIM nandritra izany, fa hirohotra eny Mahamasina ny antoko TIM manerana ny Nosy sy ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka amin’ny 8 jolay 2017 ho avy izao etsy Mahamasina, mandritra ny fankalzana ny faha-15 taonan’ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM), ho avy ihany koa ny solontena tsy ankanavaka avy amin’ireo Faritra 22 sy ny Faritany 6 manerana an’i Madagasikara. Nosoritan’ity olom-boafidy ity fa tsy manavaka na iza na iza i Dada sy i Neny sy ny TIM, fa misokatra ho an’ny vahoaka rehetra tsy ankanavaka io fanamarihana io. Hisy ny mpanakanto malaza hanafana ny fotoana hoy izy, hisy koa ny mpihira ara-pilazantsara (chorales) isan-tsokajiny, ny Zumba lehibe, ny fampirantiana, hisy koa ny hetsika ara-panatanjahantena, ankoatra izany mbola hisy ny zavatra tsy hampoizina na surprise mandritra io fotoan-dehibe io hoy ihany ny depiote Félix.
Nice sy Antananarivo
Hiditra lalina ny firaha-miasa
Hohamafisina sady hiditra lalina ny fiarahamiasa sy ny fifandraisana eo amin’ny Tanànan’Antananarivo sy ny Tanànan’i Nice any Frantsa ; omena aina vao rahateo ny maha- mpirahavavy ny roa tonta izay somary natoritory teo aloha. Nisongadina izany nandritra ny fihaonan’ny Solontenan’ny Tanànan’i Nice misahana ny Teknika Franck Garneron sady Filoha Lefitry ny Fikambanana A.F.G Consult sy ny Ben’ny Tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana omaly tetsy amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely .
Misy avy hatrany ny vinan’asa hotanterahana ka tafiditra amin’izany ny fanatsarana sy ny fanadiovana ny Tanànan’ Antananarivo Renivohitra ka tafiditra amin’izany ny lakan-drano ; fantatra fa hanolotra fitaovana ny Tanànan’i Nice hoentina hanatanterahana izany . Ho an’ny Boriboritany faha-5 manokana dia efa nisy ny fidinana nataon’ny Kaominina sy ny tomponandraikitra eny an-toerana nijery ny asa tokony hatao ka anisan’izany ny fanatsarana ny tsena eny Analamahitsy Cité sy ny tobim-pahasalama eny Analamahitsy Tanàna izay tokony hasiana fanavaozana noho ny fahanterany . Vonona hanampy izany tetik’asa izany ny Tanànan’i Nice . Ankoatra izay koa dia hiditra an-tsehatra amin’ny fampanofanana amin’ny lafiny fitantanana Tanàna sy ny resaka Teknika ary ny tetikasa momba ny fananganana fotodrafitr’asa ity Tanàna iray any amin’ny Cote d’Azur Frantsa ity.
Nambaran’ny Filohan’ny Filan-kevitra Monisipaly, Andriambahoaka Faustin kosa fa tsy azo hamaivanina ny fanampiana sy ny fiarahamiasa avy any ivelany amin’ny fampandrosoana ny Tanànan’Antananarivo .
57 taonan’ny fahaleovantena: tsy soa tsy ratsy, toy ny hoditr’androngo
Isan-taona dia manamarika ity fety iray nanomezan’ny mpanjanaka ny “fahaleovantenany” ity ny Malagasy. Samy nanana ny mampiavaka azy avokoa ny Repoblika efatra nifandimby. Ny tsapa aloha dia tany aloha dia tsy azo natao mihitsy ny mandray zava-pisotro misy alikaola ny tontolo andron’ny 26 Jona. Antony ara-pandriampahalemana no nandrarana izany fepetra izany. Torak’izany koa tamin’ny fankalazana ny fetin’ny 14 Jolay tamin’ny fanjanahantany ary tsy maintsy nanangan-tsaina ny isan-tokatrano. Tsy toy ny ankehitriny kosa dia nahazo nanarampo tamin’ny fanapoahana tsipoapoaka ny zatovo sy ny ankizy rehetra izay afaka nanao izany.
Nandritra ny Repoblika I dia ireo efa nahazoazo taona ka mahatadidy, dia roa sosona ny fety ho an’ny ankizy miaraka amin’ny harendrina sy afomanga ny 25 Jona ary ny tsikonina ny 26 Jona. Teny ambanivohitra dia mbola nampiasa kapoaka nasiana jabora, iny no nentin’ny ankizy nilahatra eran’ny tanàna. Nalaza tamin’izany koa ny “podium” teo anoloan’ny Lapan’ny tanàna ka nifandimby niakatra teo ireo mpanakanto malaza sy ny mpanao vakodrazana nandritra ny herinandro. Na dia efa tamin’ny folo ora alina aza matetika vao mirava izany dia tsy nanana ahiahy ny mpijery rehefa nody. Teo koa ny fetin’ny tafika izay teo Antanimbarinandriana no nanamarihana azy ka nisy ny tranoeva maro nisy lalao samihafa ary ny matso dia notontosaina teo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena. Nandray anjara tamin’ny matso ihany koa ireo sekoly niankina tamin’ny fanjakana nisy teto an-drenivohitra.
Rehefa may ny Lapan’ny Tanàna ny volana Mey 1972 dia nisy fotoana fohy nanaovana ny matso teny Anosy ary taty aoriana dia tao amin’ny kianjaben’i Mahamasina no natao ny matson’ny tafika ary teny Betongolo ny fetin’ny tafika. Tsy nisy intsony ny fetin’ny tafika kanefa tamin’ny 26 Jona ihany koa no nitsangana ny tafika Malagasy ary ny fisin’izany sy ny fananana sainam-pirenena no ahafahana milaza fa manana ny fiandrianany sy mahaleotena ny firenena iray.
Nisy fiovàna lehibe kosa ny fankalazana ity fetim-pirenena ity nanomboka ny taona 2009. Niaraha-niaina fa ny tafika no nanongam-panjakana ary ireo andiany nanatanteraka izany no lasa mpamoritra ny mpiray firenena aminy ka nivadika ho “hery” (force d’intervention spéciale) iray nentina niaro ny mpitondra ny tetezamita ary izy ireo ihany koa no tena niavaka tamin’ny matso tao Mahamasina ny 26 Jona 2009.
Ilay sainam-pirenena koa dia nalona tao amin’ny rano maimbon’Anosy ka very hasina tanteraka. Nitobaka ny fivarotana zava-pisotro mahamamo teny amin’ny Araben’ny Fahaleovantena sy zaridainan’Anosy. Tsy azo lavina fa henjana ny fiambenana ireo filoham-pirenena nifandimby. Nanana ny andiany manokana niaro azy, izay tena natahoran’ny mpiray firenena mihitsy, ny filohan’ny tetezamita, Rajoelina Andry, kanefa toa tsy nahasakana ireo lazaina fa velampandrika saika namonoana azy izany toy ilay baomba teny amin’ny “Marais Masay”.
26 Jona fahaefatra nandalovan’ny filohan’ny Repoblika IV, Rajaonarimampianina Hery Martial, tamin’ity taona 2017 ity. Naniry toy ny ananana ireo manamboninahitra ambony nampiakariny ho jeneraly kanefa arakaraka ny maha betsaka azy ireo no vao mainka mampitombo ny tsy fatokiana ny tafika. Etsy an-daniny koa dia toa ny vahoaka mihitsy no atahorany satria efa 57 taona izao no nisian’ny matso teto an-drenivohitra fa tsy mbola nisy fisavana ny vahoaka nirohotra niditra tao Mahamasina tahaka ny tamin’ity 26 Jona 2017 ity; ary nampiasana avokoa ny fitaovana raitra, “drone sy ny portique” nitsikilovana ireo nitady nanaonao foana. Ny tahotra anefa no betsaka satria “ny ratsy atao tokoa, hono, loza mihantona”, ny maro tamin’ireo olona nameno ny “gradin” anefa dia olona nokaramaina, ary ireo teo amin’ny “tribune centrale” dia olona nasaina avokoa.
Fanao maneran-tany koa, hono, ny fametrahana ny fitaratra tsy laitry ny bala toy ny napetraka nanoloana ny filohan’ny Repoblika mivady sy ireo filohan’ny Andrim-panjakana. Ny tsapan’ny olompirenena tsotra anefa dia fitokana-monina sy tsy fitiavana ny hiara-mihosona amin’ny mpiray Firenena aminy iny fihetsika iny. Ny fahafatesan’ny olona iray anefa tsy tonga raha tsy amin’ny androny ary tsy misy mahasakana izany, satria tsy voaaron’ny hamaroan’ny kalesiny sy ny soavaliny ny mpanjaka.
Manana zo hiaina milamina ny Malagasy rehetra fa tsy ny mpitondra ihany
Natao antsoantso tetsy sy teroa fa atao avo lenta ny fitandroana ny filaminana mandritra ny fanamarihana ny Fetim-pirenena indrindra tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina anatiny sy ivelany . Nampiasaina hatramin’ny Drone sy ny fitaovam-pitiliana manaraka ny Teknolojia avo lenta ; natao nanakoako fa an’arivony ny mpitandro filaminana nahetsika .
Nasiana fiarovana manokana ny Filoham-pirenena izay nanaovana trano fitaratra nandritra ny fijerena matso . Tsy misy mihitsy ny maharatsy izany saingy ny fanontaniana mipetraka dia izao: fa maninona no tsy atao isan’andro ny fihetsiketsehana toy ireny ? Nahoana raha atao manerana ny nosy fa tsy eto Antananarivo ny hetsika fitandroana fandriampahalemana toy ireny tetsy Mahamasina ireny ? Misy karazan’olona sy faritra arovana amin’ny fomba avo lenta ve eto Madagasikara ? Fa angaha tsy ny Malagasy rehetra no manana zo hiaina ao anatin’ny fahatonian-tsaina ?
Raha tsorina ny resaka dia ilaina mandritra ny taona ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany fa tsy mandritra ny matso etsy Mahamasina ihany . Nahoana raha mba ampiasana Drone ny mpangalatr’omby sy ny mpanao bizina amin’ny bois de rose miainga any anaty ala? Raha tian’ny mpitondra ny hampandroso haingana an’i Madagasikara dia tsy maintsy ataony izay hampandry fahalemana ny Firenena Malagasy iray manontolo fa raha tsy izany dia tsy hisy zavatra hanjary eto . Ny fandriampahalemana no antoky ny finiavan’ny olom-pirenena hiasa . Miteraka fahantrana ny tsy fandriampahalemana ka tokony hieritreritra ihany ny Fanjakana, sa ahoana hoy ianao ?
Vitsy mpanjifa ireo kilalao sy fialam-boly samy hafa
Nizotra tamim-pilaminana tanteraka ny fankalazana ny fetim-pirenena ho an’ny Faritra Vakinankaratra. Azo lazaina fa niaina tao anaty fety ny mponina na dia hita ihany aza fa miaina anaty fahasahiranana ny vahoaka raha tarafina amin’ny fahavitsian’ny mpanjifa ireo kilalao sy fialam-boly samihafa, nitobaka izay tsy izy. Isan’ny nampifaly ny mponin’Antsirabe ny fiantombohan’ny fety tamin’ny alalan’ny “Fetin’ny Mozika”, izay nankalazaina ny Sabotsy 24 Jona tontolo andro, nanoloana ny gara izany, izay nahitana mpanankanto marobe ihany koa. Tetsy ankilany dia nisy ny fifaninanan-kira Malagasy nokarakarain’ny onjam-peo RTA narahina “Podium” goavambe ihany koa nanoloana ny Imperial Hotel, izay nisian’ny Artista marobe, nitohy ny alahady 25 jona izany.
Ny hariva dia nifaly tamin’ny afomanga avy amin’ny fitondram-panjakana ihany koa ny mponina Antsirabe na dia tsy dia nisy endriny firy mitaha tamin’ny isan-taona aza ireo afomanga no sady tsy dia ireny afa-misidina avobe ireny intsony. Ny Andron’ny fetim-pirenena dia ny Préfet-n’Antsirabe no nitarika ny lanonana rehetra, notronin’ireo olom-panjakana sivily sy miaramila nanoloana ny araben’ny fahaleovan-tena ka ny fizarana mariboninahim-pirenena Nasionaly ho an’ireo olona niisa 86 mianadahy mianaka no nanombohana izany ka niisa 2 ny “Grand Croix de 2e Classe”, 8 nahazo ny “Grand Officier”, 9 “Commandeur”, 35 “Officier” ary 32 “Chevalier”. Taorian’izay dia nitohy tamin’ny filaharana notarihin’ny mpitandro filaminana ny hetsika, narihin’ny mpiasan’ny Prefektiora sy ny faritra ary ny kaominina izany ary notohizan’ireo servisim-panjakana isan-tsokajiny ary ny mpianatra izany.
Nisy ny nofon-kena mitam-pihavanana nifampizaran’ny mpikarakara dia ny Prefektiora ka nifampizaran’ny tompon’andraikitra ny hafatry ny mpitondra fanjakana amin’izao fankalazana ny fetim-pirenena izao nanodidina ny lohahevitra : “Mamiko ny taniko, ny fisandratany no fanambiko”.
Miantraika amin’ny fahafaham-panadinan’ny zaza Malagasy ny fahantrana
Samy efa nahafantatra ny valin’ny fanadinana Cepe avokoa ny ankamaroan’ny olona . Amin’ny ankapobeny dia nihena ny vokatra izany hoe maromaro no tsy afaka, izay efa mahatratra ny antsasamanilan’ny mpiadina . Ho an’ny mpitondra fanjakana izay mieritreritra fa mila miakatra ny fahaizan’ny zaza Malagasy dia tsotra ny teny ambara amin’izy ireo ; diso avy hatrany ny mety ho filazana fa tsy mahay ny zaza Malagasy ; mahay ny zaza Malagasy sady maranin-tsaina saingy ny marina dia izao ; tsy eo ampelantanana sy tsy hiainan’ny ankizy eto Madagasikara ny lamina miteraka fahaizana mitondra any amin’ny fahafaham-panadinana .
Tsy mahagaga raha maro no tsy afaka Cepe satria ny ankizy sasany mandeha dia an-tongotra an-Kilometatra maro no atao vao tonga any antsekoly any amin’ny faritra sasany eto Madagasikara ; eo koa ny Delestazy lavareny ka voafetra ny fotoana ianaran’ny ankizy any an-trano ; ny sakafo tsy zarizary sy ny maro tsy voatanisa . Raha fintinina dia hita taratra tamin’ny valim-panadinana farany teo ny fiatraikan’ny fahantran’ny Malagasy ; Izay no marina, sa ahoana hoy ianao?
Antoko sy asa sosialy
Nanao didipoitra faobe ny TIM Avaradrano
Ho fanalàna fahasahiranana ny mponina ao amin’ny distrikan’Avaradrano dia nisy ny didipoitra faobe nataon’ny antoko Tiako i Madagasikara ( TIM), tamin’ireo ankizy tao amin’ny amin’ny kaominina Alasora ny sabotsy teo ary tao Ambohimangakely kosa ny omaly alarobia . Tao anatin’izany, nisy ny fanolorana kilalao sy vatomamy ho an’ireo ankizy nataon’ny solombavambahoaka voafidy tao an-toerana, Andriambolaina Gerry sy ny DISTIM ary ny COMTIM tarihin’i Andrianjafy Christian ho an’ireo ankizy . Natao izao didipoitra faobe amin’ny fomba moderna izao hoy ny depiote Gerry mba hanalàna fahasahiranana ny ray amandreny amin’izao andro sarotra izao , mampanantena anareo ny antoko TIM hoy izy fa mbola maro ny zavatra hatao eto Avarandrano , indrindra ny fijerena ny mahasoa ny vahoaka amin’ireo tetikasa hiarahana amin’ny solmbavambahoaka .
Fa nanafatra ireo mpikambana ao amin’ny antoko TIM , na ireo mpomba ny filoha Marc Ravalomanana ny filohan’ny COMTIM ao Ambohimangakely Andrianjafy Christian ny amin’ny fankalazàna ny faha- 15 taona ny antoko TIAKO i MADAGASIKARA izay hatao eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina amin’ny sabotsy faha- 8 jolay ho avy izao, mba ho avy hirodorodo ho eny antoerana avokoa isika rehetra hoy izy.
Tsy nanadino ireo ankizy sy zokiolona ao amin’ny Boriboritany VI
Fikambanana vao niforona nahazo ny fankatoavana ara-panjakàna ny 25 mai teo ny fikambanana MAEVA ao amin’ny boriborintany faha 6 tarihin’ny filohany Rami . Na vao haingana aza ny nijoroany dia tsy nijery fotsiny ireo ankizy madinika ao amin’ny boriborintany misy azy ny fikambanana MAEVA fa nisy ny fanoloran’izy ireo arendrina sy biscuit ho azy ireo . Teo ihany koa ny fanolorana fitafiana ho an’ireo zokiolona tao amin’ny biraon’ny firaisana faha 6 Ambohimanarina . Tsy hijanona amin’izao fotsiny ny fikambanana araka ny nambaran’ny filohany Rami fa hisy ny fikarakaràna ireo zaza sahirana sy kamboty any amin’ny toerana efa azon’ny fikambanana eny Ankazobe .
Tsy manao politika ny MAEVA nefa kosa resy lahatra fa ny filoha Marc Ravalomanana ihany no afaka hanarina ity firenena ity , ka vonona izy ireo hanohana azy . Marihina moa fa mpikambana ao amin’ny antoko Tiako i Madagasikara ao amin’ny boriborintany faha 6 avokoa ny ankabeazan’ireo mpikambana ao anatin’ny association MAEVA mpanao asa soa.
INAY ANIE AHO MPIARA-MISAOSY AMINAREO RAHERY
Inay aho mba olona mpiara-misaosy aminareo Rahery,
Ka na dia mangalatra volam-bahoaka aza dia tsy ho very,
Satria tsara mpiaro amin-java-drehetra ka tsy mba manahy,
Fa mitoetra eny ambony lalàna eny foana ka sahy dia sahy.
Satria ny eo akaikinareo , hono mantsy, dia voajerijery.
Raha toa ka migadra dia atokan-toerana , omena ny tsara.
Na aterineto aza tiana hafarana , tsy diso anjara.
Ianay aho mba olona mpiara-misaosy aminareo Rahery,
Satria amin`izay aho dia tena inoako fa tsy handeha irery.
Ny bizina ataoko dia handeha ho azy , tsy hisy arakaraka,
Ka dia ho ela velona hatrany , sakaiza, ilay hoe gaboraraka!
Inay aho mba olona mpiara-misaosy aminareo Rahery.
Na asa maloto aza mantsy no ataoko , tsy mila miery,
Satria sioka tokana fotsiny ihany no alefan`ise,
Dia misinda ny sakana heverina ho ngeza sy goavana be.
DADAN`i ZINA (28-06-17)
Galerie | Cet article, publié dans Non classé, est tagué Marc Ravalomanana, Ny Valosoa, TIM, Valosoa 29 Juin. Ajoutez ce permalien à vos favoris.